Fennec: मोजिलाको मोबाइल ब्राउजर | लिनक्सबाट
Fennec: मोजिलाको मोबाइल ब्राउजर
फेनेक को संस्करण हो फायरफक्स मोबाइल उपकरणहरूको लागि, र यसको विकास डेस्कटप संस्करणको साथ हातमा जान्छ। यहाँ संस्करण १०.०a१ को नयाँ सुविधाहरु छन्।
De फेनेक म एक पटक बोलें Com-SL, र यदि हामी त्यो संस्करण तुलना (7.0A1) यसका साथ हामी पर्याप्त परिवर्तनहरू देख्दछौं। सुरू गर्नका लागि, पूर्ण पुन: डिजाइन गरिएको इन्टरफेस, जुन ट्याबहरूको डिजाइनमा देखिन सकिन्छ विन्डो अधिकतम बनाइएको।
अब सूचीमा केहि धेरै रोचक विकल्पहरू समावेश गर्नुहोस् जुन मसँग पहिले थिएन, वा कम्तिमा मैले यो देखेको थिइनँ: पृष्ठ PDF मा निर्यात गर्नुहोस्.
र सेवाहरू जस्तै पृष्ठमा पृष्ठ साझा गर्नुहोस् twitter, फेसबुक, Google Reader वा केवल मेल द्वारा।
जस्तो तर्क हो, फेनेक समर्थन गर्दछ एक्स्टेन्सनहरू, यसको आफ्नै छ डाउनलोड प्रबन्धक, यो धेरै विन्यास योग्य छ र तपाईंसँग उपकरणहरू छन् प्रतिक्रिया बग रिपोर्ट गर्न।
1 प्रोक्सीको साथ Fennec।
प्रोक्सीको साथ Fennec।
यदि तपाईं प्रोक्सी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हामी म्यानुअल्ली म्यानुअली केही समायोजनहरू गर्नु पर्छ जुन ग्राफिकल ईन्टरफेस मार्फत सम्भव छैन, वा कमसेकम यसले मेरो लागि काम गरेन। हामी के गर्न छ सरल छ। हामी फाईल खोल्छौं ~ / .mozilla / fennec / /prefs.js र हामी अन्तमा निम्न रेखाहरू थप्दछौं:
कहाँ 10.10.0.5 प्रोक्सी सर्भरको आईपी ठेगाना हो।
मैले प्रयास गरेको छु फेनेक एक लिनक्स पीसीबाट यो तार्किक छ, र प्रदर्शन को बारेमा छ 30 एमबी, त्यसैले यो एक उत्कृष्ट विकल्प हुन्छ यदि हामी स्रोतहरूको कम छ भने।
नकारात्मक पक्ष भनेको यो हो कि यो एक बिस्तारै ढिलो हुन्छ प्रभावको खेल खेल्दा जूम वेबसाइटहरूमा, तर हुनसक्छ यो विकल्प असक्षम गर्न सकिन्छ। अधिकतम नेभिगेसनको लागि स्क्रिनमा राम्रो क्षेत्र दिन्छ।
यदि तपाईं कसरी यो काम गर्दछ भन्ने बारे अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं लेखमा लेख्न सक्नुहुनेछ Com-SL। तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यो लिङ्क.
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » Fennec: मोजिलाको मोबाइल ब्राउजर
फायरफक्स7यहाँ छ, उत्तम मेमोरी प्रदर्शनको साथ
क्यारोलिना Gtk: नीलो टोनको साथ मिन्टी फ्रेशनेस